ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များ | USAHello ကနေအလုပ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များနှင့် non-profit နှင့်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. သငျသညျပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ယူနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီးအကြောင်းကို Read. သင်လိုအပ်သောအရာကိုလေ့ကျင့်ရေးထွက်ရှာဘယ်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်.
ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များအများပြည်သူအစေခံကြောင်းအလုပ်အကိုင်များများမှာ. ဤအအလုပ်အကိုင်များအများအပြားအတွက်, သငျသညျအစိုးရကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည် - ဤဒေသခံဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ပြည်နယ်, သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ် (အမျိုးသားရေး) အစိုးရ. သို့မဟုတ်သင် non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်. ဤလူမျိုးသည်လှူဒါန်းရန်အတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖို့ရာကိုရှာဖွေကူညီပေးနေမှတစုံတခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များနှင့်သူတို့မကြာခဏပြဿနာများဖြေရှင်းရေးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို. ပြဿနာများအသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း, ဤပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ရန်ဆန္ဒရှိနေသောကြောင့်လူများအတွက်ဝယ်လိုအားအမြဲရှိ. သငျသညျစိန်ခေါ်မှုများကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ဒီသို့အရငျဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကွက်ဖြစ်၏. အစိုးရနှင့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးကအလုပ်တစ်သငျသညျကလူကိုကူညီနိုင်ရှိရာအရပ်ဌာနနှင့်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်.
ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲသူ - ပညာရေးအစိုးရကန်ဆောင်မှုများကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. စီမံခန့်ခွဲကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်များ၏ဤဧရိယာ၌ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ.
အလုပ်အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး - ထိုအဖွဲ့အစည်းအတွက် non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းကိုထောက်ခံသူများတစ်ညွှန်ကြားရေးမှူး, ပိုက်ဆံပေါ်ပေါက်, ဝန်ထမ်းများမှအစည်းအဝေးတွေနဲ့ Assign တာဝန်များကိုရရှိထားသူ. သင်ကြား ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်.
ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံ - အတိုင်ပင်ခံထိုကဲ့သို့သောမူဝါဒများအောင်အဖြစ်ကိစ္စရပ်များတွင်အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့် Non-အမြတ်အစွန်းအကြံပေး, တွေ့ဆုံဘတ်ဂျက်, နှင့်မည်သို့ကောင်းစွာစုစည်းဖို့.
မြို့တော်ဝန် - အုပ်ချုပ်ရေးမှုးသူတို့မြို့များနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတက်သည်စကားပြောဆို, မြို့သူမြို့သားကောင်စီနှင့်အတူအလုပ်, နှင့်ရပ်ရွာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ပါစေ. မြို့တော်ဝန်အရာရှိတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြသည်.
Program ကိုလက်ထောက် - program တစ်ခုလက်ထောက်အစီအစဉ်များကိုစုစည်းနှင့်အစီအစဉ်များကိုဒါရိုက်တာကိုထောကျပံ့ကူညီပေးသည် - အခြား non-profit အလုပ်အကိုင်များဖို့ကောင်းတစ်ဦးခြေလှမ်းသောကျောက်. သင်ကြား ဘယ်လို program တစ်ခုလက်ထောက်ဖြစ်.
ဖြစ်ရပ်မှန်မန်နေဂျာ - တစ်ဦးအမှုမန်နေဂျာ၎င်းတို့၏အထူးသဖြင့်အခြေအနေများနှင့်အတူလူကိုကူညီပေးပါ, ထိုကဲ့သို့သောဘဏ္ဍာရေးအဖြစ်, ဥပဒေရေးရာ, ဆေးဘက်, အလုပ်, သို့မဟုတ်အိမ်ရာကိစ္စများ. ဘာသာစကားနှစ်မျိုးကျွမ်းကျင်မှုဝယ်လိုအားများမှာ, ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခသည်နှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပါလိမ့်မယ်.
Program ကိုလေ့လာဆန်းစစ် - အစီအစဉ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်သူတို့ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်အစီအစဉ်များကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, သူတို့ကိုပိုပြီးထိရောက်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့. အစိုးရနှင့် Non-အမြတ်အစွန်းအများအပြားအစီအစဉ်များကိုပြင်ပမှာအကူအညီဖြင့်တိုးတက်နိုင်ပါတယ်အတိုင်းဤအဖိုးတန်ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်.
ဘာသာပြန်ဆိုသူနှင့်စကားပြန် - စကားပြန်စကားပြောစကားများနှင့်စကားစမြည်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်, နှင့်ဘာသာပြန်များကျမ်းစာ၌ရေးထားသောစကားနှင့်အလုပ်မလုပ်. တူညီတဲ့လူတစ်ဦးနှစ်ဦးစလုံးအလုပ်အကိုင်များလုပျနိုငျ. ဤရွေ့ကားဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဘို့ကြီးသောအလုပ်အကိုင်များများမှာ. သင်ကြား ဘယ်လိုဘာသာပြန်ဆိုသူသို့မဟုတ်စကားပြန်ဖြစ်.
အိမ်ရာအထူးကု - ဤအလုပ်အကိုင်များအတွက်အလုပ်လုပ်သူတွေကိုမိသားစုများတတ်နိုင်အိမ်ရာကိုရှာဖွေကူညီမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်. တတ်နိုင်အိမ်ရာဘို့လိုအပ်ကြောင်းဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်မြင့်တက်နေသည်ကတည်းက, ဒီသို့ကြည့်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်လိမ့်မည်.
သုတေသနတွဲဖက်ပါမောက္ခ - သင်သုတေသနနှင့်အင်တာဗျူးများပို့ချစိတ်ဝင်စားလျှင်, နှင့်ပစ္စည်းများနှင့်အစီရင်ခံစာများကိုထုတ်လုပ်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျလူထုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကွက်ဖြစ်၏. ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာအတွက်အရေးကြီးသည် - သငျကောင်းသောအရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကောင်းသောအင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
လည်း, သငျသညျကောငျးစှာအသုံးပွုဖို့သင့်မျက်နှာသစ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ်! သင်၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အခြားယဉ်ကျေးမှုများ၏နားလည်မှုကိုသင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကူညီပေးနေသို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံနေကြဘယ်မှာမဆိုလယ်ပြင်၌တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်.
သငျသညျဤသူသည်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလျှင်သေချာမသိကြပါလျှင်, သင်လုပ်နိုင်သည် careeronestop.org မှာ Self-အကဲဖြတ်စမ်းသပ်မှုယူ. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် အစိုးရနှင့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကြည့်ရှု.
သငျသညျကွောငျ့, သင်၏ယခင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအချို့ကိုပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များသို့ရနိုငျ. ပြည်သူ့များစွာသောအခြားလယ်ကွက်ထဲကနေပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရိုက်ထည့်ပါ: သိပ္ပံ, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ကျန်းမာရေး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, နှင့်ပညာရေး. ဥပမာ, သင်တစ်ဦးဆရာမအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလျှင်, သငျသညျပညာရေးအတွက်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအလုပ်သို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း. သငျသညျသေးငယ်တဲ့အိမ်ရာ non-profit အတွက်အလုပ်လုပ်နေလျှင်, သငျသညျကလူအိမ်ရာကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်သူတစ်ဦးအမှုမန်နေဂျာဖြစ်ခြင်းသို့စကားပြန်အနေအထားကနေမရွှေ့စေခြင်းငှါ. သငျသညျပြီးသားဆိုအလုပ်အတွက်အများပြည်သူန်ထမ်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ကြောင်းလည်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
အတော်များများကအလုပ်ရှင်များကိုပိုမိုတိကျသောအထောက်အထားများကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကတစ်ဦးတွဲဘက်ရဲ့ဒီဂရီသို့မဟုတ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဘွဲ့ဘွဲ့နှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုလိုပေမည်, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်တစ်ဦးဆက်စပ်လယ်ပြင်၌အခြားဒီဂရီပွုပါမညျ - လူမှုရေးအလုပ်, စီမံခန့်ခွဲမှု, နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအရည်အချင်းများပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များအတွက်အားလုံးအသုံးဝင်. တစ်ဦးကမာစတာရဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် (မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်) အစိုးရအတွက်အလုပ်လုပ်လိုသူလူများအတွက်ထိပ်တန်းအရည်အချင်းများဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်သင့်ရဲ့ဘွဲ့ဘွဲ့၏ထိပ်ပေါ်မှာအခြားနှစ်နှစ်ကြာ.
တစ်ဦးကလက်မှတ်ရပြည်သူ့ Manager ကို (CPM) တစ်ဦးသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ခဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. အကယ်. သင်ပြီးသားအများပြည်သူန်ထမ်း, ဒီအုပ်ချုပ်ရေးသို့ရဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုပါလိမ့်မယ်. တစ်ဦး CPM သင်တန်းကိုရှာပါ.
အများပြည်သူန်ထမ်းအဖြစ်သို့မဟုတ် non-အမြတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအလုပ်မလုပ်နေချိန်မှာအွန်လိုင်းအနေနဲ့မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် get နှင့်အတွေ့အကြုံရဖို့ရန်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်. မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် Programs ကိုအတူအွန်လိုင်းကျောင်းများ Find.
အတော်များများကအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အလုပ်အကိုင်များကိုဦးတည်သွားစေနိုင်သည်ဟုသင်တန်းများပူဇော်. ပုံမှန်သင်တန်းအများပြည်သူစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်, ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း, မြို့ပြအမှုတမ်းလုပ်ငန်း, ဘတ်ဂျက်, အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများ, နှင့်အများပြည်သူကဏ္ဍအုပ်ချုပ်ရေး. သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာပါ.
သင်တစ်ဦးသည်ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းကမှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများကအတွေ့အကြုံကိုရရှိနိုငျ. သငျသညျ non-profit အဖွဲ့အစည်းများမည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်, သင့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေ, နှင့်သင့် network ကိုတည်ဆောက်. မှာလုပ်အားပေးဖို့နေရာရှာပါ Volunteermatch.org.
သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဒီဂရီရှိပါက, Upwardly ကမ္တာ့ အလုပ်-အခွင့်အာဏာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကူညီပေးသည်, ဒုက္ခသည်များ, asylees, နှင့်အထူးလူဝင်မှုဗီဇာကိုင်ဆောင်သူ (SIVs) USA တွင်၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်များကို restart လုပ်ပါ.
သငျသညျကိုအမေရိကန်အစိုးရအတွက်အလုပ်လုပ်ချင်ပါနဲ့, ဒေသန္တရအစိုးရ, ဒါမှမဟုတ် Non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်? ဤတွင်အချို့ရွေးချယ်မှုများဖြစ်ကြသည်:
Idealist.org non-profit အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူစာရင်းအလုပ်အကိုင်များ.
သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေနဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ကြည့်ဖို့, သူတို့ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူစတင်ရန်. ဒါဟာအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သင့်ရဲ့ပြည်နယ်၏နာမတော်ကိုဖြစ်လိမ့်မည် “.gov” - ဥပမာ, Montana.gov. အိမ်စာမကျြနှာတှငျ, သင်တို့ကဲ့သို့တစ်ခုခုကပြောပါတယ်တဲ့ tab ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် အလုပ်အကိုင်များ, အလုပ်, လုပ်သားအင်အား သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ. အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်ရှိပါတယ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အစိုးရအလုပ်အကိုင်များများအတွက်. အများအားဖြင့်, သငျသညျဖက်ဒရယ်အစိုးရအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်. သင်၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်မည်အကြောင်း,, ဥပမာ.
ခပ်သိမ်းသောမြို့အတွက်အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့များမှာ. သူတို့ကအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကခရိုင်များနှင့်မြို့နှင့် non-profit အလုပ်အကိုင်များပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်. သင်တို့သည်လည်းကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ် applications များနှင့်အတူရှိကိုကူညီရနိုင်. သူတို့ကအလုပ်သင်တန်းနှင့်ပညာရေးရန်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်. Find သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင်စင်တာ.